कपडाको मास्क कस्तो र कसरी लगाउने ? – Kantipur Press
मास्क लगाउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो पनि हो कि आफूले प्रयोग गरेको मास्क अरूलाई प्रयोग गर्न दिनुहुन्न । यदि कपडाको मास्क भिजेको छ भने त्यसलाई सुख्खा बनाएर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्छ । यसलाई नलगाउने बेलामा सफा प्लास्टिकभित्र राख्न सकिन्छ । यदि मास्क फोहोर भएको छ भने त्यसलाई साबुनपानीले धुनुपर्छ ।अनलाईन खबरबाट
राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको १०१ वर्षको उमेरमा नि’धन !
दक्षिण कोरियामा विगत ५ महिना यताकै उच्च सङ्क्रमण, स्थिति भयावह हुनसक्ने !